एजुकेसन फेयर विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि हो |
एजुकेसन फेयर विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि हो
प्रकाशित मिति :2018-07-30 11:44:30
— शालिकराम भण्डारी
द नेक्स्टएजुकेसन कन्सलटेन्सी
(सन् २००५ मा स्थापित द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सलटेन्सीले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको छ । काठमाडौंस्थित डिल्लीबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको द नेक्स्टको चितवन, बुटवल, पोखरा, पर्सा, धरान, कावासोती तथा अष्ट्रेलियास्थित सिड्नी र पर्थमा शाखा कार्यालयहरु क्रियाशील छन् । हजारौं विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पठाइ सकेको नेक्स्टले यही साउन १७ गते होटल अन्नपूर्ण काठमाण्डौंमा ‘द नेक्स्ट अष्ट्र«ेलियन एजुकेसन फेयर—२०१८’ आयोजना गर्न गइरहेको सन्दर्भमा आधारित रहेर द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सलटेन्सीका कार्यकारी निर्देशक शालिकराम भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
वर्तमान समयमा शिक्षा प्रणालीमा व्यापक परिर्वतनहरु भइरहेका छन् । हरेक दिन जस्तो नयाँनयाँ एकेडेमिक कोर्षहरु प्रचलनमा आइरहेका छन् । समाजको आवश्यकता र मागअनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा पनि निरन्तर सुधार र परिवर्तन भइरहेको छ । विगतको जस्तो एउटै कोर्स र सेलेवसले वर्षाै धान्ने अवस्था छैन । समयक्रमसँगै विभिन्न कोर्षहरुसँग विद्यार्थीहरु अभ्यस्त बन्दै जानुपर्छ । यसका लागि उ निरन्तर अपडेट हुनु जरुरी छ । एजुकेशन फेयरहरुले एउटै थलोमा विद्यार्थीहरुलाई अनगिन्ती सूचना र परामर्श प्रदान गर्छ । अष्ट्रलिया कै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ आवश्यकता अनुसार शैक्षिक नीति नियम र शैक्षिक विषयहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । यस्ता कुराहरु बारे विद्यार्थीहरुलाई समय मै र एउटै थलोमा जानकारी प्रदान गर्न फेयरको आवश्यकता पर्दछ ।
मुलभूत रुपमा दुई किसिमका एजुकेसन फेयरहरु प्रचलनमा छन् । धेरै कन्सलटेन्सीहरु मिलेर र कुनै कन्सलटेन्सी एक्लैले युनिभर्सिटी तथा कलेजहरुलाई सहभागी गराएर फेयर गर्ने गरेका छन् । धेरै कन्सलटेन्सी मिलेर गरिने फेयरमा कन्सलटेन्सीले मात्रै विद्यार्थीहरुलाई सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने अभ्यास छ । एउटा कन्सलटेन्सीले गर्ने फेयरमा सम्वन्धित विश्वविद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिहरु पनि उपस्थित हुन्छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय र कलेजको विषयमा सोझो सोझो संवाद गर्न पाउनु भनेको ‘फस्ट हेन्ड इन्फरमेसन’ प्राप्त गर्नु हो । यसले तथ्यपरक सूचनाप्रदान गर्छ । विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र विषयहरुको बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्छन् ।
हामीले अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर गर्दै आएका छौं । एउटा कन्सलटेन्सीले आयोजना गरेको फेयरमा २५ भन्दा बढी अष्ट्रेलियन कलेज तथा विश्वविद्यालयको उपस्थिती हुनु निकै सकारात्मक विषय हो । नेक्स्टले गरेको फेयरहरु, अष्ट्रेलियन कलेज तथा विश्वविद्यालयको उपस्थितिले मात्र होइन नेपाली विद्यार्थीहरुको सहभागिताका दृष्टिले समेत उच्च छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
यही साउन १७ गते बिहीबार द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सलटेन्सीमार्फत होटल अन्नपूर्ण काठमाडौंमा हुन गइरहेको ‘द नेक्स्ट अष्ट्र«ेलियन एजुकेसन फेयर—२०१८’ कुन प्रकारको फेयर हो ?
यो फेयर, द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सलटेन्सीको पहलमा हुन गइरहेको छ । हामीले यो फेयर आयोजना गर्नुको मुल उद्देश्य भनेको विद्यार्थीलाई सहजता होस् भन्ने नै हो । विद्यार्थीले सही इन्फरमेसन पाउन्, कुनै इस्कलरसीपको अवसर छ भने त्यसबाट विद्यार्थीहरु नछुटुन्, आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य अनुसारको ट्यूसन फि र कलेजहरुको छनौट गरेर अष्ट्रेलिया जान सकुन् वा अष्ट्रेलिया जाँदा वा त्यहाँ पुगि सकेपछि पनि उनीहरुले कुनै पनि समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर हामीले फेयरको आयोजना गरेका हौ । द नेक्स्ट अष्ट्र«ेलियन एजुकेसन फेयर—२०१८ मा अष्ट्रेलियाका २५ भन्दा बढी युनिभर्सिटी तथा कलेजहरुको सहभागिता रहने छ । प्रत्येक युनिभर्सिटी तथा कलेजबाट प्रतिनिधिहरु आउनु हुने छ ।
फेयरमा अष्ट्रेलियाका कुन–कुन विश्ववद्यालय र कलेजहरुको उपस्थिति रहने छ ?
फेयरमा अष्ट्रेलिया का वलङघन युनिभर्सिटी, अष्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटी, व्लू माउन्टेन होटल स्कुल, मेलबर्न इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी, चाल्र्स स्टर्ट युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ ताजमानिया, साउथेन क्रस युनिभर्सिटीलगायतको उपस्थिती रहनेछ । फेयरमा उपस्थित हुने विद्यार्थीका लागि हामीले प्रिभिलेज कार्डको ब्यवस्था गरेका छौं । जुन कार्डमार्फत विद्यार्थीले द नेक्स्टले प्रदान गर्ने आईएलटीएस अध्ययन प्रोसेसिङ्गलगायतका अन्य सुविधामा भारी छुट प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको पनि व्यवस्था पनि छ । यसरी फेयरमा हरेक विद्यार्थीले आवश्यक सूचना र परामर्र्श सँगसँगै विविध सेवा र सुविधाहरु प्राप्तगर्न सक्नेछन् ।
अष्ट्रेलियन एजुकेसनसँग सम्बन्धित परामर्श त तपाईहरुले द नेक्स्ट मार्फत हरेक दिनदिँदै आउनु भएको छ, फेयर नै किन गर्नु प¥यो ?
द नेक्स्टमा १०÷१२ जना काउन्सिलरहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हरेक दिन विद्यार्थीहरुलाई परामर्र्श दिँदै आउनु भएको पनि छ । तर, फेयरमा सम्बन्धित कलेज वा युनिभर्सिटीहरुको प्रतिनिधि आउने भएका कारण इन्फरमेसन थप प्रभावकारी हुन्छ । विद्यार्थीहरुले प्रत्यक्षरुपमा कलेज र युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिसँग परामर्श लिन पाउँछन् । हामीले भन्नुभन्दा पनि सम्बन्धित प्रतिनिधले आफ्नो विषयमा भन्नुले कुनै पनि ‘कन्फ्यूजन’ रहँदैन ।
अष्ट्रेलियाजाने विद्यार्थीहरुले कुन–कुन कुरामा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्छ ?
अष्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडि कुन विषयको अध्ययनले आफ्नो करिअर निर्माण हुन्छ भन्नेमा विद्यार्थी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । करिअर अनुसारको विषय छनौट गर्न सकियो भने अष्ट्रेलिया गइसकेपछि कलेज र विषय परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसबाट आफूले गरेको लगानी गुमाउनु पर्दैन । आफ्नो शैक्षिक र आर्थिक सामथ्र्य अनुसारको विषय छनौट गर्न सक्नुपर्छ । आफूले छनौट गरेको विषयमा इस्कलरसीप छ कि छैन ? कुन–कुन युनिभर्सिटी र कलेजहरुले इस्कलरसिप दिन्छन् ? यसबारेमा जानकारी लिनुपर्छ र सोहीअनुसार प्रोसेस गर्नुपर्छ ।
विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको उच्च मागका कारण धेरै शैक्षिक परामर्श दाता कन्सलटेन्सीहरु सञ्चालनमा छन्, अष्ट्रेलिया पढ्न जाने एउटा विद्यार्थीले द नेक्स्ट नै किन रोज्ने ?
द नेक्स्ट स्थापनाको पहिलो दिनबाटै हामीहरुले विद्यार्थीहरुलाई सही, गुणस्तरिय र उसको सामथ्र्य अनुसारको कलेज र विश्वविद्यालय छनौट ज्ञान प्रदानगर्दै आइरहेका छौं । हामीकहाँ आउने हरेक विद्यार्थीले सही गाइड पाउँछन् । सन् २००५ मा स्थापित द नेक्स्टले हालसम्म हजारौं विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया पठाइसकेको छ । यसबाट पनि नेक्स्टको सेवा सुविधा स्पष्ट हुन्छ । अर्काेतर्फ अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि एकेडेमिक क्वालिफिकेसन र आई.एल.टि.एस. मात्र भएर पुग्दैन । अन्य धेरै प्रोसेसहरु पनि हुन्छन् । खासगरी विद्यार्थीको फाईनाईन्ससियल ब्याग्राउण्ड र उसको शैक्षिक सामथ्र्य अनुसारको कलेज र विषय छनौट गर्नुपर्छ । हामीहरु यस विषयमा पनि विद्यार्थीलाई उचित परामर्र्श दिन्छौं । हामी मार्फत अष्ट्रेलिया गएको विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्नका लागि विद्यार्थीलाई धेरै कुरामा सजग गराउँछौं ।
द नेक्स्ट अष्ट्र«ेलियन एजुकेसन फेयर—२०१८’ सँग सम्बन्धित रहेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
द नेक्स्टप्रति सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरुले देखाउनु भएको विश्वास प्रति हामी आभारी छौं । आगामी दिनमा पनि यस्तै विश्वास कायम राख्न सफल हुन्छौं भनेर सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौं । द नेक्स्टले यही साउन १७ गते बिहीबार काठमाण्डौंको होटल अन्नपूर्णमा आयोजना गर्न गइरहेको द नेक्स्ट अष्ट्र«ेलियन एजुकेसन फेयर—२०१८’मा सहभागी भइदिनुहुन सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई आह्वान गर्दछौं । यो फेयर अष्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि उत्कृष्ट अवसर हो । खासगरी अभिभावकहरुले आफ्ना सन्ततिको भविश्यसँग जोडिएको विषयमा सम्बन्धित कलेज र युनिभर्सिटीको प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उत्कृष्ट कलेज वा युनिभर्सिटीको छनौट गर्न सक्नु हुनेछ । जसले विद्यार्थीहरुको भविश्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउने छ ।
देशभरीका निजी विद्यालयको हितमा प्याब्सनिष्ट भएर काम गर्नेछु – टीकाराम पुरी
२० वर्षको अनुभवलाई प्याब्सन र निजी क्षेत्रको विकासमा समर्पित गर्नेछु – डी. के. ढुंगाना
निजी लगानीको सुरक्षा गर्नका लागि, लविङका लागि काम गर्नेछु – राजेन्द्र बानियाँ